Chọtara 250 ~ MATIU, MAK, LUK, JỌN, ỌLU OZI, ROM, 1 KỌRINT, 2 KỌRINT, GALETIA, EFESỌS, FILIPAI, KỌLỌSI, 1 TESALỌNAIKA, 2 TESALỌNAIKA, 1 TIMỌTI, 2 TIMỌTI, TAITỌS, FAILIMON, HIBRU, JEMES, 1 PITA, 2 PITA, 1 John, 2 JỌN, 3 JỌN, JUD, NKPUGHE
Mgbe ahụ Jisọs jụrụ ndị na-eso ụzọ ya sị, “Gịnị mere ụjọ ji na-atụ unu? Ebee ka okwukwe unu gara?”
Jisọs sịrị ndị na-eso ụzọ ya, “Lee ka okwukwe unu si dị nta! Ruo ole mgbe ka mụ na unu ga-anọ tupuu unu ekwere? Ruo ole mgbe ka m ga-anọgide na-edi ekweghị ekwe unu? Kpọtara m nwanta nwoke ahụ!”
Jisọs jụrụ nna nwanta ahụ sị, “Gịnị mere i ji na-asị Ọ̀ bụrụ na i nwere ike? Ọ dịghị ihe onye ọ bụla nwere okwukwe na-agaghị enweta.”
Nna nwanta ahụ zara sị, “Ekweere m, biko mee ka m nwee okwukwe karịa.”
Jisọs gwara ndị na-eso ụzọ ya okwu sị, “Nweenụ okwukwe nꞌime Chineke. Nꞌihi na m na-agwa unu sị, ọ bụrụ na unu enwee okwukwe nꞌime Chineke, unu pụrụ ịgwa ugwu olivu a okwu sị,
Mgbe Jisọs nụrụ ozi ọchịagha ahụ ziri ka e zie ya, o juru ya anya nke ukwuu. Mgbe ahụ ọ tụgharịrị lee ndị mmadụ na-eso ya anya sị ha, “Nꞌezie, o nwebeghị oge m hụrụ onye nwere okwukwe dị ka ọchịagha a si nwee okwukwe. Nꞌezie ahụbeghị m ụdị okwukwe a nꞌala Izirel nile.”
Ma Jisọs gwara nwanyị ahụ sị, “Ọ bụ okwukwe i nwere nꞌime m zọpụtara gị.”
Ma Jisọs zara ha sị, “Ọ bụrụ na unu nwere okwukwe nke ga-aha ka mkpụrụ mọsụtadị, unu nwere ike ịsị osisi ukwu a, ‘Site na mgbọrọgwụ fopụta onwe gị, burukwa onwe gị gaa daba nꞌosimiri,’ ọ ga-emekwa ihe unu nyere ya nꞌiwu.
Ọ dịkwaghị onye dị ndụ nke nwere okwukwe nꞌime m, ga-anwụ anwụ. Mata, ị kweere nke a?”
Ana m agwa unu ihe ndị a mgbe ihe ọ bụla na-emebeghị, ka ọ bụrụ na mgbe o mere unu ga-enwe okwukwe.
“Ana m agwa unu ihe ndị a nile ka unu ghara ịda mba nꞌokwukwe unu.
Ọ gwara Tọmọs sị ya, “Rụnye mkpịsị aka gị nꞌapa ntu dị m nꞌaka, tinyekwa aka gị nꞌakụkụ m. Abụla onye na-enweghị okwukwe kama kwere!”
Ọ bụ okwukwe nwoke a nwere nꞌaha Jisọs ka e ji mee ka ọ dịkwa ike ọzọ. Unu nile na-ahụ ya. Unu makwaara ya. Ee! Okwukwe ya mere ka ahụ dị ya mma, dị ka unu ji anya unu na-ahụ!
O gere ntị mgbe Pọl na-ekwu okwu Chineke. Ma Pọl legidere ya anya hụ na ọ bụ nwoke nwere okwukwe nke a ga-eji mee ka ahụ dị ya ike.
Ma ebe Judas na Saịlas nwere onyinye ikwuwa okwu, ha kwupụtara okwu Onyenwe anyị nꞌime nzụkọ Kraịst oge ahụ nile, mee ka okwukwe ndị kwere ekwe nọ nꞌobodo ahụ guzosie ike.
Ihe ndị a nile mere ka nzukọ Kraịst too eto nꞌokwukwe na nꞌọnụ ọgụgụ.
ỌLU OZI 23:29
Ma na-atụfughị mgbe achọpụtara m na ọ bụ ihe banyere okwukwe ndị Juu. Nꞌeziokwu o nweghị ihe ọ bụla kwesịrị mkpọrọ ma ọ bụ onwụ nꞌime ya.
ỌLU OZI 24:21
Karịa na m kwuru nanị otu ihe mgbe m tiri mkpu sị, ‘Unu na-ekpe m ikpe taa nꞌihi okwukwe m na ndị nwụrụ anwụ ga-adị ndụ ọzọ.’ ”
Mgbe abalị ole na ole gasịrị, Feliks na nwụnye ya Drusila bụ onye Juu, batara nꞌụlọ ikpe. O ziri ka a kpọọ Pọl. Ya na nwụnye ya gere ntị mgbe Pọl gwara ha okwu banyere inwe okwukwe nꞌime Jisọs Kraịst.
Aghaghị m imalite site nꞌikele Chineke ekele nꞌihi unu, site nꞌaha Jisọs Kraịst. Nke a bụ nꞌihi na ụwa nile anụla ihe gbasara okwukwe unu, nꞌihi na ebe ọ bụla m gara ana m anụ ka a na-ekwu okwu banyere okwukwe unu nwere na Chineke.
Onye ka ngọzi a Devidi kwuru okwu ya dịịrị? Ọ dịịrị ndị Juu kweere na Kraịst ma na-edebekwa iwu? Ka ọ dịịrị ndị ahụ kweere na Kraịst ma ha adịghị edebekwa iwu? Ka anyị lee anya na ndụ Eberaham. Ihe anyị kwuru bụ na Chineke nabatara ya nihi okwukwe ya. Chineke ọ nabatara ya nihi okwukwe ya nanị? Ka ọ nabatara ya nihi na o debekwara iwu?
Ọ pụtala ìhè ugbu a na nkwa ahụ Chineke kwere Eberaham na agbụrụ ya na ha ga-eketa ụwa abụghị nihi na Eberaham debere iwu Chineke, kama ọ bụ nihi na o kweere na Chineke. Ọ bụkwa site nokwukwe ya, ka Chineke ji gụọ Eberaham nonye ezi omume.
Nihi na ọ bụrụ na nkwa Chineke dịịrị nanị ndị na-edebe iwu, inwe okwukwe abaghị uru, inwe okwukwe bụkwa nzuzu, nihi na nkwa ahụ Chineke kwere enwekwaghị isi ọ bụla.
Ya mere Chineke na-enye anyị ngọzi ya nile site nokwukwe anyị nwere nime ya. Ọ na-enyekwa anyị ya nefu. Anyị ga-anata onyinye ndị a ma ọ bụrụ na anyị enwee ụdị okwukwe Eberaham nwere. Ya mere nihe gbasara inwe okwukwe nime Chineke, Eberaham bụ nna anyị.
Gịnị gbochiri ha? Ọ bụ nꞌihi na ha achọghị isite nꞌokwukwe bụrụ ndị Chineke ga-anabata. Ha chere na ha pụrụ isite nꞌịrụ ọrụ ọma bụrụ ndị Chineke ga-anabata. Site nꞌụzọ dị otu a, ha abụrụla ndị sụrụ ngọngọ nꞌoke nkume ịsụ ngọngọ ahụ.
Otu aka ahụ, ọ bụrụ na ndị Juu ahụ e bipụrụ nꞌihi enweghị okwukwe emesịa bụrụ ndị kweere na Chineke, a ga-anyapagidekwa ha dị ka alaka osisi ahụ.
Ya mere, ka anyị nile ndị okwukwe ha siri ike hapụ ichefu na anyị ka ọ dịrị inyere ndị okwukwe ha na-esighị ike aka. Anyị ekwesịghị ime nanị ihe na-atọ anyị ụtọ.
Ugbu a, ụmụnna m, o nwere otu ihe ọzọ m chọrọ ịgwa unu tupuu m mechie akwụkwọ ozi a. Wezuganụ onwe unu site nꞌebe ndị ọrụ ha bụ iweta nkewa, ndị na-eme ka okwukwe ndị ọzọ hapụ iguzosi ike nꞌihi ozizi ha na-ezi banyere Kraịst nke megidere ihe ahụ nile e ziri unu.
1 KỌRINT 4:10
Okwukwe anyị kwere na Kraịst emeela ka anyị ghọọ ndị nzuzu nꞌihu unu, ma unu onwe unu bụkwa ndị Kraịst maara ihe! Lee ka anyị si bụrụ ndị na-adịghị ike, mgbe unu na-awụgharị dị ka agụ. Lee ka anyị si bụrụ ndị a jụrụ ajụ na ndị a na-agụ dị ka ndị na-abaghị uru, ma unu bụ ndị a na-asọpụrụ!
1 KỌRINT 9:22
Ọ bụrụkwa na mụ na ndị okwukwe ha na-esighị ike anọkọọ, ana m emekwa dị ka ha, ka m nwee ike mee ka ha mata Kraịst. Ee, otu ọ bụla mmadụ si dịrị, ana m agbalị chọọ ụzọ m ga-esi mee ka ọ nabata m, ka m nwee ike gwa ya ihe banyere Kraịst, Ka Kraịst zọpụta ya.
Ọ bụrụkwa na e meghị ka Kraịst si nꞌọnwụ bilie, ihe anyị na-ezisa bụ ihe efu, okwukwe unu nwere nꞌime Chineke bụ ihe efu.
Ọbịbịa m ga-abịa abụghị ka m gwa unu ihe unu na-aghaghị ikwere, nꞌihi na okwukwe unu siri ike. Kama, ihe m chọrọ bụ ime ka ọṅụ unu dịwanye ukwuu.
Ọ bụghị na anyị na-ekwu na ọ bụ anyị rụrụ ọrụ nile, ya na ọrụ nke ndị ọzọ rụrụ nꞌetiti unu, kama olileanya anyị bụ na okwukwe unu nꞌime Chineke ga na-eto eto mgbe nile, ka ọrụ ahụ Chineke chọrọ ka anyị rụọ nꞌetiti unu bụrụ nke ga-eto eto.
Ihe m na-akọwa bụ nke a: Chineke ekweela nkwa ịzọpụta ndị sitere nꞌokwukwe bịakwute ya. O kwuola ya, dee ya nꞌakwụkwọ, mgbanwe ọ bụla apụghị ịdịkwa. Ọ bụ ezie na mgbe narị afọ anọ na iri afọ atọ gasịrị, Chineke mesịrị nye ndị Juu iwu iri ya, ma nke a apụtaghị na a kagbuola nkwa mbụ ahụ Chineke kwere Eberaham ịzọpụta mmadụ site nꞌokwukwe.
Iwu ahụ dịkwa ka onye ozizi anyị, iduzi anyị nꞌụzọ anyị ga-agbaso, tutuu Kraịst abịa, mee ka anyị bụrụ ndị ezi omume nꞌihu Chineke, site nꞌokwukwe anyị nwere nꞌime ya.
Nꞌihi na anyị nile abụrụla ụmụ Chineke ugbu a, site nꞌokwukwe anyị nwere nꞌime Kraịst Jisọs.
Ọ bụ nꞌihi ihe ndị a nile, site na mgbe m nụrụ akụkọ otu okwukwe unu siri sie ike nꞌime Onyenwe anyị Jisọs, nụkwa otu unu siri na-ahụ ndị kwere ekwe nọ ebe nile nꞌanya,
Nꞌezie, ọ bụrụ na a wụsịa ọbara m dị ka ihe ịchụ aja nye Chineke nꞌihi okwukwe unu, ee, a sị na e gbuo m nꞌihi unu, aga m aṅụrị ọṅụ meekwa ka unu soro m ṅụrịa ọṅụ.
Nꞌihi na anyị anụla ihe banyere okwukwe unu nꞌime Kraịst Jisọs, na otu unu si hụ ndị Chineke nꞌanya.
Ugbu a unu esitela na ndụ unu mee ka ozi ọma Onyenwe anyị gbasaa gabiga Masidonia na Griis. Nꞌihi na ebe ọ bụla anyị gara anyị na-ahụ ndị na-agwa anyị ihe banyere okwukwe dị iche unu nwere. Anyị adịkwaghị agwa ndị mmadụ ihe banyere okwukwe unu.
Ma ugbu a, Timoti esitela nꞌebe unu nọ lọghachikwute anyị. O mere ka anyị mata na okwukwe unu guzo chịm; o mekwara ka anyị mata na unu na-echeta anyị mgbe nile. Na ọ na-akpasị unu mkpa ike ịhụ anyị anya, dị ka o si akpa anyị mkpa ịhụ unu anya.
Ebe ihe ga-esi otu a dịrị, anyị na-arịọ Chineke arịrịọ nꞌihi unu, ka o mee unu ụdị ụmụ ya ọ chọrọ ka unu bụrụ. Ka o mee ka unu dị mma dị ka ọ chọrọ, ka o site nꞌokwukwe unu nye unu ike ya.
A họpụtakwala m nꞌeziokwu ka m bụrụ onyeozi Chineke, ikwusara na izi ndị mba ọzọ ozi ọma a, na igosi ha ụzọ ahụ Chineke kwadoro isi zọpụta ndị mmadụ site nꞌokwukwe.
Nꞌihi na ndị ahụ rụrụ ọrụ ije ozi ha nke ọma nwere ụgwọ ọrụ. Ụgwọ ọrụ ha bụkwa nsọpụrụ ahụ ndị ọzọ ga-asọpụrụ ha, na nkuwa okwu ha nwere banyere okwukwe ha nꞌime Kraịst Jisọs.
2 TIMỌTI 1:1
Akwụkwọ ozi a si nꞌaka m Pọl, onyeozi Kraịst Jisọs, onye Chineke zipụrụ ịgwa ndị nile nọ nꞌebe nile, nwoke na nwanyị, ihe banyere ndụ ebighị ebi o kwere ha na nkwa site nꞌokwukwe nꞌime Jisọs Kraịst.
Ọ bụ site nꞌokwukwe ha ka ndị mbụ kweere na Chineke ji nwee nnwapụta ọma ya.
Ọ bụ site nꞌokwukwe ka anyị ji mara na e mere ụwa na ihe nile anyị na-ahụ anya site nꞌokwu Chineke. Nꞌihi nke a, ihe anyị na-ahụ anya ugbu a bụ ihe e mere site nꞌihe anyị na-adịghị ahụ anya.
Ebel bụ nwoke nwere okwukwe nꞌime Chineke. Ọ chụrụ aja dị mma nye Chineke karịa aja nke nwanne ya Ken chụrụ. Site nꞌokwukwe o nwere nnwapụta Chineke na ọ bụ onye ezi omume. Chineke nabatara Ebel nꞌihi na o nyere onyinye ya site nꞌokwukwe. Ma ugbu a, ọ bụ ezie na Ebel anwụọlarị, anyị nwere ike ịmụta ihe site na ndụ ya banyere inwe okwukwe nꞌime Chineke.
Site nꞌokwukwe, Eberaham rubeere Chineke isi. Chineke gwara ya ka ọ hapụ ala ya gaa nꞌala ọzọ dị anya Chineke ga-egosi ya. Ọ bụ nanị ala e kwere na nkwa! Ma Eberaham biliri gaa, ma ọ mataghị ebe ọ na-aga.
Site nꞌokwukwe Eberaham biri nꞌala ahụ Chineke kwere ya na nkwa. Ma ọ bụ ọbịa nꞌebe ahụ. Otu aka ahụ Jekọb na Aizik bikwara nꞌebe ahụ dị ka ndị ọbịa. Ma Chineke kwere ha nkwa na ha ga-enwe ala ahụ.
Ndị a nile bụ ndị nwere okwukwe nꞌime Chineke. Ma ha nwụrụ na-ele anya nkwa Chineke kwere ha. Ha ṅụrịrị ọṅụ nꞌihi nke a, na-aghọtakwa na ha bụ ndị ọbịa nꞌụwa.
Ọ bụ okwukwe ka Aizik jiri nye Jekọb na Ịsọ ngọzi banyere ihe dị nꞌihu.
Ọ bụ okwukwe ka Jekọb ji gọzie ụmụ Josef tupuu ọ nwụọ. Ọ kpọrọ isi ala nye Chineke mgbe ọ na-adabere na mkpa nꞌaka ya.
Josef gosiri okwukwe tupuu ọ nwụọ. O kwuru okwu banyere otu ndị Izirel ga-esi hapụ ala Ijipti, nye ndụmọdụ banyere ịchịkọta ọkpụkpụ ya.
Mosisi nwere okwukwe mgbe o toro ghọọ dimkpa. O kweghị ka a kpọọ ya nwa ada Fero.
Mgbidi Jeriko dara mgbe ụmụ Izirel jiri okwukwe gaa ya gburugburu ụbọchị asaa.
Rehaab (nwanyị akwụla), esoghị ndị na-ekweghị ekwe lakọọ nꞌiyi nꞌobodo Jeriko nꞌihi na ọ bụ site nꞌokwukwe ka o jiri lekọtaa ndị Izirel ledoro obodo Jeriko anya.
Ọ dịkwa ọtụtụ ndị ọzọ bụ ndị biri ndụ okwukwe. Ma enweghị m oge ikwu ihe banyere ha. Ndị dị ka Berak, Samsin, Jefta, Devidi, Samuel na ndị amụma.
Okwukwe ka ha jiri merie mba dị iche iche. Okwukwe ka ha jiri bie ndụ ezi omume, nata nkwa dị iche iche. Okwukwe ka ha jiri meekwa ka ike ọdụm ghara ịdị ire.
Ma lee! ndị a nile natara ezi ọgbụgba ama site nꞌokwukwe ha, ma ha anataghị nkwa ahụ Chineke kwere ha.
Ha enwetaghị nkwụghachi okwukwe ha nꞌihi na Chineke pịara na ha ga-echere soro anyị keta ihe nketa kachasị mma nke Chineke kwadooro anyị.
Ma mata nke a, na ana m abịa ọsịịsọ. Jidesiekwa okwukwe nta ahụ i nwere aka ike, ka onye ọ bụla ghara ịnapụ gị okpu eze ahụ a kwadobere inye gị.